Semalt: Izizathu ezi-5 zokungafumani iziPhupha ezaneleyo kwiSayithi
Oku kuluhlu lweemimandla ezintlanu ezisoloko zinganakwa ngenxa yokuba umninimzi akayiqondi indlela asebenza ngayo okanye indlela yokuphatha ngayo. Qaphela ukuba utshintsho alukho imiphumo emihle ngokukhawuleza kwaye idinga umonde.
UJason Adler, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt Iinkonzo zeDis Digital, uchaza apha iiposiso eziqhelekileyo ze-SEO.
1. Okungenakulinganiswa okufanelekileyo
Okwangoku, iinjini zokukhangela , ingakumbi i-Google, ukuphatha umgangatho wekhontrakthi ngokubaluleka okukhulu kunye nokubeka i-algorithms zabo ukuqinisekisa ukuba zithatha umxholo omhle. Umxholo osemgangathweni kunye newebhsayithi jikelele i-precursor yokuba ne-website ephantsi ihlasele kwaye itshintshe i-traffic. Ngaphandle kweenjini zokukhangela, amajelo asekuhlaleni anempembelelo engathanga ngqo kwiziko kunye kweendlela zewebhu .
Isiqulatho esiqinisekileyo sokwandisa ithrafikhi sinelisekisa zonke iingcebiso zokukopisha ezisebenza emva kwePanda, kunye nePenguin, ezipapashwe kwikhasi eliphezulu eligunyazisiweyo, liphandwa kakuhle kwaye libi.
2. Ukufuna Amagama aPhakamileyo eMqhudelwano
Ngokukodwa kubandakanyeka ngeenjini zokukhangela. Iiwebhusayithi ezininzi zincintisana ukuba zibe kwiphepha lokuqala le-SERP, elineendawo ezilishumi kuphela. Iinjongo zophando zizama ukubonisa iindawo ezithembekileyo kwiindawo ezilishumi eziphezulu. Uninzi lwezi zizazi ziyaziwa ngamagama abalulekileyo athandwayo kwiimarike..Ngenxa yolu khuphiswano, ukuzama ukubeka amanqaku athile aqhelekileyo kwiwebhsayithi ezayo kunzima.
Ekubeni iifayile ezidumile ziphuma kumbuzo, enye indlela ukusebenzisa umzila omde. Hlanganisa amagama angundoqo omsila xa usebenzisa i-Google yegama elingundoqo igama njengoko bancintiswano oluncinci. I-traffic ye-website ayikwazi ukuba yinto eninzi njengamagama akwii-keywords kodwa yindlela efanelekileyo yokuphucula ukuqonda ngethemba ngeenjini zokukhangela.
3. I-Website engezantsi
I-Google isebenzisa ijubane njengento yokubala ukususela ekubeni ifuna ukukhulisa amava omsebenzisi walo. Nangona kunjalo, abathengi banokubuyela kwakhona kwiwebhusayithi ngomthwalo wokukhawuleza. Ukuba ihamba ngokukhawuleza, abasebenzisi baya kuphuma kwiphepha. Isayithi okanye iphepha lingafumana i-traffic transfers ukusuka kwezinye iindawo kodwa ihluleka ukuhlangabezana nesantya esiphezulu somthwalo wemigqa engama-4-5, ngaloo ndlela iholele iindwendwe ukuba zihambe ngaphandle kokubukela nantoni na. Ukuba ixesha lokulayisha liye landa kwiwebhusayithi, i-website iyahlula ngokuqinisekileyo ekuphuculeni nayo ityala ukukhula kwendlela. Kwakhona kwandisa ithuba lokubonakala kwiindawo ezilishumi eziphezulu.
4. A Hit nge Panda okanye Penguin
Utshintsho kwi-injini ye-algorithm yenzululwazi lunokuchaphazela indlela idibansi idibene ngayo kwi-SERP, kwaye ngenxa yoko, inani lezithuthi ezifunyenwe. Ukuba i-Panda okanye i-Penguins ibetha isayithi lakho, ngoko i-traffic experience iqhubeka ihlahla kakhulu imihla. Ingqhathanisa ingxelo ye-Google Analytics xa i-traffic iqalile ukwehla xa i-Google yenza izibuyekezo kwi-algorithm yazo. Ukuba kukho ulungelelaniso, qhubeka uqhuba utshintsho oluthile ukuze uphinde uphinde uphinde ufumane indawo ye-website.
Ukuba kwakungekho yezo zibini, mhlawumbi kusencinci, kukho umxholo omncinci, akukho ubungqina bokusetyenziswa kweendaba zentlalo, akukho mithombo ehambayo yendlela, okanye ukwenza enye okanye ngaphezulu kweefayile ze-SEO ezikhankanywe. 8)
5. Ukhuphe i-SEO ephosakeleyo
Kukho ezininzi iingcali ze-SEO ezizimeleyo kwiwebhu namhlanje. Ukukhetha inkampani engafanelekanga ye-SEO inokuhlawula ishishini lendlela kunye namanye amathuba. Musa ukukholwa konke okubonakalayo kwi-intanethi. Qinisekisa kwaye uqinisekise wonke umntu okanye iqela oyithathayo ukuhlalutya kwe-SEO.